Cypress | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ọrịa na pests nke cypress, ihe iji mee ma ọ bụrụ na cypress dries
Cypress bụ "oke nchekwa ọhịa" magburu onwe ya, nke nwere ike ịmalite ma n'ime ụlọ na saịtị. Esi ísì nke sitere n'osisi nta a na-echetara na ọ na-agagharị na ikuku ọhụrụ na oke ọhịa. Cypress - osisi mgbe ọ bụla, onye nnọchiteanya nke mkpụrụ osisi cypress. Ọ nwere okpueze abụọ: sprawling na pyramidal.
Atụmatụ maka nlekọta na ịkụ osisi cypress
Mkpụrụ osisi coniferous nwere ebe dị na nhazi ọ bụla. N'afọ ọ bụla, ha adịghị atụfu ihe ịchọ mma ha, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-esi ísì ụtọ. N'etiti ụdị dịgasị iche iche nke ụdị na ụdị, onye ọ bụla na-elekọta ubi na-achọ ihe pụrụ iche, pụrụ iche. Nke ahụ bụ ihe cypress bụ. N'ime ogige ụlọ, osisi dị mma maka otu mkpụrụ osisi, ichota ogige ugbo ma mepụta ihe mara mma na omenala ndị ọzọ.
Mkpụrụ osisi coniferous: ụdị na aha
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị conifers nile na-adịgide adịgide, nke mere ha ji hụ ha n'anya ma na-ewu ewu n'etiti ndị na-emepụta ihe. Ihe dị elu na dwarf, pyramidal na cone, na ọkwá na deciduous - osisi ndị a ga-eji ogige ọ bụla, ubi ma ọ bụ ógbè dịpụrụ adịpụ chọọ mma. N'isiokwu a, ị ga-amụta ihe conifers na ụdị ha.